यसवर्षको धान उत्पादन हालसम्मकै अधिक ! « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
काठमाडौ। खेतीयोग्य जमिन क्रमशः बाझो हुँदै गएपनि नेपालको प्रमुख खाद्यान्नबाली धान उत्पादनमा २१ दशमलव शून्य ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष ४२ लाख ९९ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकोमा यो वर्ष बढेर ५२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । यो उत्पादन हालसम्मकै उच्च हो ।
धान नेपालको प्रमुख खाद्यन्नबाली हो । धानको उत्पादन बढ्दा कूलगार्हस्थ उत्पादनमा टेवा पुग्दछ भने घट्दा आर्थिक स्थिति तल झर्छ । नेपालमा चैते धान, बर्षे धान र घैया धानको खेती हुँदै आएको छ । कूलगार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३३ प्रतिशतमध्ये धानको मात्र २० प्रतिशत छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले रासायनिक मल र बीउको अभाव नभएको तथा समयमा वर्षा भएकाले जमिन बाँझो हुन नपाएकाले धानको उत्पादनमा वृद्धि भएको बताए । त्यस्तै कृषि प्रविधिको विकास तथा सिफारिस गरिएका धानका उन्नत जात किसानले लगाएका कारण उत्पादनमा बृद्धि भएको हो । तराईमा सावित्री, विन्देश्वरी, राधा चार, पहाडमा खुमल ४, १० र ११ तथा उच्च पहाडमा चन्दननाथ आदिको उत्पादकत्व स्थानीय जातको भन्दा दोव्बर रहेको तथा सिफारिस गरिएका धानका जातले ढाकेको क्षेत्रफल ९० प्रतिशत भन्दा बढी रहेका कारण धान उत्पादन बढेको कृषि विभागका महानिर्देशक युवकध्वज जिसी बताउँछन् ।
उनले खानेबानीमा सुधार गर्ने हो भने यसवर्ष नेपालीले ३२ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्नबाली निर्यात गर्न सकिने तर यसका लागि आलुलाई पनि खाद्यान्नका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । यस आर्थिक वर्षमा आलुको उत्पादन २८ लाख मेट्रिक टन भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा धान, मकै, कोदो, फापर (तीते र मीठे) को कूल उत्पादन एक करोड चार लाख मेट्रिक टन भएको छ । हालको जनसङ्ख्यालाई धान्न ९६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न भएपुग्छ ।
पहिले नेपालमा उत्पादित धान, चामल, निर्यात गर्न सात, आठवटा धान चामल कम्पनी थिए । तर अहिले धान चामल निर्यात गर्ने देश आयात गर्ने देशमा गणना हुनथालेका छन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार अहिले प्रतिमहिना रु.एक अर्ब मूल्य बराबरका चामाल आयात हुने गरेको छ ।
विश्वमा चीन, भारत, इन्डोनेसिया, बङ्गलादेश, भियतनाम, थाइल्यान्ड, म्यानमार, फिलिपिन्स, ब्राजिल र जापान धेरै धान उत्पादन गर्ने देशमा पर्छन् । नेपाल विश्वमा सबै भन्दा अग्लो स्थानमा धानखेती गर्ने देशमा गणना हुन्छ । नेपालको जुम्ला जिल्लाको छुमचौरमा जुम्लीमार्सी धानखेती हुन्छ । जसको चामल सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ ।